Ahoana no fomba fisorohana ny delestazy ataon'ny mpitsikera iray amin'ny fitiavany anao - Mpanararaotra
Ahoana no fomba fisorohana ny delestazy ataon'ny mpitsikera iray amin'ny fitiavany anao
Ny fitiavana dia zavatra tsara tarehy, fa ny narcissist dia tsy mahay mahatsapa na maneho azy fotsiny. Ary misy antony iray tsotra maninona.
Raha misitrika ao an-tsain'ny narcissist ianao (ary mitandrema raha manao izany) dia ho hitanao fa ny eritreritr'izy ireo dia mihodina manodidina azy manokana, ny filany, ny hetahetany ary ny fomba hahatratrarany ny tanjony.
ny fomba hamerenana amin'ny laoniny ny fanambadiana
Amin'izy ireo, ny olon-kafa dia zavatra ampiasaina hampiasaina hanasoavana sy hanomezana fahafaham-po azy ireo. Mino izy ireo fa ambony noho ny olon-drehetra sy amin'ny olon-kafa izy ireo, ary ity delestazy amin'ny fahalehibeazana ity no antony voalohany tsy ahatsapan'izy ireo ilay antsoiko hoe izaho sy ianao hoe fitiavana.
Ny fitiavana, ny tantaram-pitiavana na ny zavatra hafa, dia fifandraisan'ny fiombonan'ny fanahy izay ifanarahan'ny olona roa sy ny fifampitondrany. Mba hahafahana miforona io fifandraisana io, ny roa tonta dia tsy maintsy mahita mihoatra ny sosona ivelany an'ny olona ary mijoro ho vavolombelona ny fahamarinana miafina ao ambany. Tsy maintsy mifanaiky izy ireo ho toy ny taratry ny maha-olombelona azy ary, ny tena zava-dehibe, dia mitovy aminy.
Ny fitoviana, amin'ity lafiny ity, dia midika hoe mendrika fanajana, fitsaboana ary fikarakarana mitovy amin'ny zavamananaina mpiara-miaina. Ary ny fitiavana dia tsy voafetra ho an'ny zanak'olombelona hafa fa mitovy amin'ny azo atao ny mahatsapa fitiavana ho an'ireo mpikambana ao amin'ny fanjakan'ny biby.
Na izany aza, ny mpitsabo tena dia tsy mihevitra ny hafa hitovy amin'ny azy ireo. Mino marina izy ireo fa tsara kokoa, mendrika kokoa ary lehibe kokoa amin'ny lafiny rehetra.
Araka izany dia mipetrapetraka eo ambonin'ny mpandeha an-tongotra izy ireo ary mijery tsy misy afa-tsy olona maloto. Mahagaga ve izany raha tsy mahay mamorona karazana fifandraisana akaiky izay fototry ny fitiavana ny mpifoka rongony?
Raha tsy afaka hanaiky izy ireo fa misy zavamananaina iray mitovy mendrika sy mendrika toa azy ireo, ahoana no hataon'izy ireo amin'ny fomba maneho izany fitoviana izany? Ahoana no ahafahan'izy ireo mitia?
Valiny fohy: tsy afaka izy ireo.
Inona no dikan'ny mpahay siansa rehefa miresaka fitiavana izy ireo?
Ny tsy fahaizan'izy ireo mahita na iza na iza mitovy aminy dia mety hanakana ny mpifoka rongony tsy ho tia, nefa tsy manakana azy ireo hanambara ny 'fitiavany' amin'ny hafa izany. Raha ny marina, ny fanambarana aloha loatra ny fitiavany tsy manam-petra dia paikady ankafizin'ireo mpihinana marobe ao amin'ilay fantatry ny besinimaro amin'ny anarana hoe fitiavana baomba .
vanim-potoana famoahana divas 7 tanteraka
Ny tsy mazava kokoa dia ny hoe raha ny tena zava-mahadomelina ve mino ny tenany fa miaina fitiavana amin'ny lafiny marina sy farany. Mety ho fantatsika fa ny zavatra tsapan'izy ireo dia tsy fitiavana, saingy mety hieritreritra izy ireo, raha ny fahitana azy, dia izany.
Ity fanontaniana ity, na dia mahaliana aza, dia tsy misy dikany. Tsy mahatsapa fitiavana izy ireo, fa zavatra hafa tanteraka.
Ny lesoka nataon'izy ireo dia ny fanakorontanana ny fahatsapana fitiavana lalina sy tsy misy hatak'andro amin'ny ambonin'ireo toe-tsaina tia fatratra . Mikasika ny fiaraha-miasa amam-pitiavana, ny ankamaroan'ny olona dia handalo fangorahana mandritra ny fotoana izay ilay zavatra irin'izy ireo dia mahalana no miala lavitra ao an-tsainy. Na izany aza, raha voatazona ny fifandraisana, dia mivoatra amin'ny fifandraisana feno fitiavana voalaza etsy ambony.
Na izany aza, ny mpifoka rongony iray dia ho tafahitsoka amin'ny endrika fitiavana mandrakizay. Saika ho variana be amin'ny manodidina sy amin'ny mpiara-miasa aminy izy ireo, amin'ny fampiasana azy ireo ho loharanon'ny famatsiana narcissistic.
Ny famatsiana narcissistic dia tonga amin'ny lasibatra - ny tanjon'ny fitiavan-dry zareo - manome ny sainista ny sainy irina ambonin'ny zavatra rehetra. Ny ankamaroan'ny mpifoka rongony, hafa noho ny karazana miafina kokoa , dia ho hitany fa tsy azo tohaina fotsiny ilay fampiranana ny saiko, ary ny fiheverana na inona na inona karazana dia hanome fahafaham-po ny fanirian'izy ireo…
… Farafaharatsiny farafaharatsiny.
Famakiana zava-mahadomelina tena ilaina (mitohy etsy ambany ny lahatsoratra):
inona no atao hoe passif
Ahoana ny fomba hiatrehana ny mpitaona zava-mahadomelina: ny fomba tokana hiasana
Mekanisma miatrika rehefa mamela ny mpiara-miombon'antoka Narcissistic ao ambadiky
Ny mpandika teny amin'ny fiteny dia ampiasaina hanodinkodinana sy handrarana ireo niharan'izany
Fanamafisana ny fanasitranana 7 ho an'ireo niharan'ny herisetra narcissistic
Moa ve ianao Machiavellianism diso amin'ny famotsoran-keloka?
Ireo saron-tava 6 mety hataon'ny mpifoka iray (sy ny fomba hahitana azy ireo)
Hitanao fa mihinana an'io fiheverana io sy ny hery entiny ny narcistista mba hanamafisana ny finoana ananan'izy ireo amin'ny maha olona ambony azy. Toy ny sakafo rehetra, ny sakafo ara-dalàna dia takiana mba hijanona ho voky.
Ka rehefa misy mpiara-miasa narcissist maka vady dia ataon'izy ireo voalohany izany mba hiantohana ny fiheverana azo antoka sy tsy tapaka. Toy izany koa, rehefa manavaka ny mpiara-miasa na namana na olona ao amin'ny fianakaviana ho traboina izy ireo, dia toy izany koa mitady izany fiheverana izany ihany .
Ity famatsiana narcissistic ity, sy ny fitiavam-pitiavany matetika, dia azo heverina ho solon'ny fitiavana. Ny narcissist dia maniry izany toa ny faniriantsika rehetra ho tiana. Hahatsapa fahafaham-po be izy ireo rehefa mahita azy io, hahazo hery avy amin'izany, ary hankahalaina hamela azy io.
Mety hieritreritra izy ireo fa ny zavatra tsapany dia fitiavana, fa rehefa mijery akaiky kokoa ianao dia mitovy amin'ny zavatra bebe kokoa manaraka ny lalan'ny fiankinan-doha. Eny tokoa, ny fifandraisan-doha dia mety hiafara amin'ny mpiara-miantehitra izay iantehanan'ilay mpifoka rongony amin'ny ankolafy hafa mba hisarika ny saina sy hitsaoka azy ireo, raha izy ireo kosa, miantehitra amin'ilay mpampindram-bola hilaza aminy ny fomba hiainany (matetika noho ny fanimbana ny mombamomba azy ireo aorian'ny volana na fanararaotana ara-tsaina).
Ireo karazam-pifandraisana ireo dia toa miseho ho be fitiavana eo amboniny, saingy tsy mihoatra ny veneer manify izay manafina ny fahamarinana miery etsy ambany io. Ny fitiavana dia mety amin'ny voambolana am-bava an'ny narcissist, saingy tsy azon'izy ireo ny tena dikan'izy ireo. Diso izy ireo ny fitiavany vola, ny filan'izy ireo famatsiana narcissistic, ary ny fahafaham-po tsapany rehefa nahazo azy io, ho an'ny fitiavana.
Amin'ny alàlan'ny hevi-dison'izy ireo amin'ny fahalehibiazana ny tena fatokisany fa olona ambony izy ireo, dia very ny fahafahany mamorona fifandraisana misy dikany amin'ireo olona hafa ny mpifoka rongony. Ny ego-dry zareo dia tsy hamela ny tenany hihemotra amin'ny toeran'ny mitovy amin'ny olona rehetra, ary noho io antony io dia tsy hita popoka mandrakizay ny fitiavan'ny tena fitiavana amin'ny fifandraisana misy azy ireo.
Na mino izy ireo na iharan'ny hetahetan'ny fitiavana marina na tsia, dia azo antoka kokoa ny milaza fa tsy misy fifandraisana narcissistic na karazany inona na inona no mifototra amin'ity fahatsapana manankarena indrindra, ity ary be mpitady indrindra.
dimy alina ao amin'ny freddy's part 1
ahoana no ilazana ny vehivavy tia anao
inona ny zava-misy mahafinaritra momba ahy
fambara fa noraisina ho zava-poana
ny fomba hialana amin'ny lolom-po amin'ny fifandraisana